I-China Double Head Decoiler, i-Double Head Mini Decoiler, i-Strip Double Head Decoiler yeVenkile
Inkcazo:Iphindwe kabini iNtloko yomkhohlisi,Iphindwe kabini iNtloko yesiKhangeli,I-Strip Stripiler yentloko ephindwe kabini,IHydraulic Double Head Decoiler,Umatshini wokuzenzekelayo kwiphepha lomatshini,Isibini esixokayo
Home > Imveliso > Umkhohlisi > Iphindwe kabini iNtloko yomkhohlisi
Iintlobo zeMveliso ze- Iphindwe kabini iNtloko yomkhohlisi , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, Iphindwe kabini iNtloko yomkhohlisi , Iphindwe kabini iNtloko yesiKhangeli ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
Abaxumi abaziiNqwelo-mafutha abaziintloko eziMoto eziPhambili  Qhagamshelana Ngoku
isantya esiphezulu sokunyathela umgca wokuvelisa  Qhagamshelana Ngoku
Abaxumi abaziiNqwelo-mafutha abaziintloko eziMoto eziPhambili
Abaxumi abaziiNtloko zeeNqwelo eziMbili abaziiNqwelo-mafutha ezinomthwalo wokulayisha kumacala omabini: imveliso ngakumbi kunye nokuseta okufutshane. Ngelixa enye i-arbor isebenza, enye ithatha ikhoyili entsha. Iimpawu zabaThengi beNqwelo mafutha...
isantya esiphezulu sokunyathela umgca wokuvelisa
Umatshini wokuThutha ongafakwanga moto oluzenzekelayo oluzenzekelayo oNgena kwi-motor Umthamo wokulayisha kumacala omabini: imveliso ngakumbi kunye nokuseta okufutshane. Ngelixa enye i-arbor isebenza, enye ithatha ikhoyili entsha. Ukukhanya...
KwiChina Iphindwe kabini iNtloko yomkhohlisi Abaxhasi
Ngokulangazelela ukunciphisa ixesha lokulayisha umqulu ukuya kwelona nqanaba lincinci, olu luhlobo luphindwe kabini lwentloko luqhuba olunye uluhlu, njengoko enye ilinda njenge-backup.
Xa umqulu ohanjiweyo ugqithile, umqulu wokulondolozwa ulungele ukuba uqhagamshelwe kumqhubi ngaphakathi kwethuba elifutshane kakhulu. Xa uqhagamshela umqulu omtsha kumqhubi, uya kuba nexesha elide ukulayisha omnye umqulu ongaphezulu. I-decoiler yentloko ephindwe kabini sisisombululo esifanelekileyo sezityalo zemveliso apho isantya semveliso kunye nokuqhubeka kwazo kubalulekile kwimveliso ebambekayo. Ihlala ilungiselelwe njalo ngomatshini we-S loop straightener, umatshini wesantya esiphezulu somatshini kunye nomatshini wokushicilela okuphezulu we-H , ihlala ilungele umshini wokujikeleza ombane kunye nesitampu sokumisa se stator.
Iphindwe kabini iNtloko yomkhohlisi Iphindwe kabini iNtloko yesiKhangeli I-Strip Stripiler yentloko ephindwe kabini IHydraulic Double Head Decoiler Umatshini wokuzenzekelayo kwiphepha lomatshini Isibini esixokayo Inkqubo yomtya wekhoyili Ukupheka Oomatshini Bokwenza Umatshini